Imandarmedia.com.np: को हुन नेपाल अायल निगमलार्इ डुबाउन कम्मर कसेर लाग्नेहरु ? यसो भन्छन् निगमका कार्यकारी निर्देशक
Business, Main News » को हुन नेपाल अायल निगमलार्इ डुबाउन कम्मर कसेर लाग्नेहरु ? यसो भन्छन् निगमका कार्यकारी निर्देशक
को हुन नेपाल अायल निगमलार्इ डुबाउन कम्मर कसेर लाग्नेहरु ? यसो भन्छन् निगमका कार्यकारी निर्देशक
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ। सांसदहरूका अनुसार निगमले झापामा खरिद गरेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुरमध्ये करिब २१ बिघा दुर्गममा पर्छ।
२०७४ साउन १९ मा प्रकाशित ।